KA QUUSTA! Farriin ku socota madaxda maamullada ee Nairobi la haya! | Hadalsame Media
Home Maqaallada KA QUUSTA! Farriin ku socota madaxda maamullada ee Nairobi la haya!
KA QUUSTA! Farriin ku socota madaxda maamullada ee Nairobi la haya!
(Hadalsame) 11 Juun 2019 – Waa farriin u socota Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada ku shiraya Nairobi. Mudanayaal, Madaxweynayaal, iga hooya salaan Soomaalinnimo, salaan saaxiitinnimo oo Muqdisho ka timid oo aan khadka idiin soo marinayo. Waxaan qiyaasayaa Ramadan iyo waddac ka dib in aad quraac wanaagsan qaadateen, qadaduna ay idiin soo carfeyso. Allah ha idiin daaweeyo.
Ma qabo in khilaafka hadda idiin dhexeeya looga sii daro. Mana qabo in uu sii jiitamo. Waxaan qabaa in aan is arag laga quusan. Ma qabo in khilaafka looga sii daro, oo caasimado shisheeye loo raro, sababta oo ah ma xammili karno, waana ka soo kornay shir Soomaaliyeed oo ka dhaca dal shisheeye.
Waxaan qabaa in aan is arag laga quusan. Waxaan qabaa in majliska minankeenna sharafta leh lagu dhex murmo. Waxaan qabaa in aan Gobol keliya loo fakarin ee heer Qaran loo fekero. Gobol badbaadayaa ma jiro haddaan Qaranku badbaadin. Gobol keligii horumar weyn oo taabba-gal ah sameyn karaana ma jiro.
Muqdisho marti kama tihiin. Waa caasimaddiinna. Waxaan qabaa in aad timaaddaan, Madaxweynaha iyo Madaxda kalena aad la gorgortantaan. Ma fududa. Laakiin yaa yiri arrimaha Soomaaliya ayaa fudud? Yaa yiri sida dal dib loogu dhiso ayaa fudud?
Fool-ka-fool in loo wadahadlo waxay keeni kartaa isu soo dhowaasho iyo in xal la gaaro. Waan ogahay in Garowe ayaad isku daydeen in is-af-garad la gaaro. Laakiin inta khilaafku uu taagan yahay, wakhtiguna xawaareynayo, ma ahan in laga quusto is arag iyo wadahadal oo ah dariiqa keliya ee idiin furan.
Mas’uuliyad gaar ah ayaa kaa saaran xallinta khilaafka. Mas’uuliyad keliya ma aha, haddii aad guul ka soo hoyso, waa dhigaal shakhi ah oo kuu yaalla Baanka wanaagga.
Ugu dambeyn, hal Soomaaliya ayaan wada nahay. Madaxweynayaal, ka quusta in aad ka quusataan wadahadal. Madaxweynayaal, ka quusta in aad ka quusataan Dowladda.
Previous articleSiyaasi jirrani kugu jeedi jambal aanay dani kuugu jirin!
Next articleMa dhabbaa in dad Soomaali ah laga ”tarxiilayo” Dhuusamareeb? (Maamulka oo ka hadlay?)